Iindaba -Izixhobo zokuLungisa iiDent
I-PDR, kwaziwa njenge Izixhobo zokuLungisa iiDent ezingenanto, ichaza indlela yokususa iidenti ezincinci kwimizimba yeemoto. Logama umphezulu wepeyinti uhleli, ipeyinti yokulungisa amazinyo yasimahla ingasetyenziselwa ukulungisa zonke iintlobo zomonakalo. Zombini i-aluminium kunye neepleyiti zensimbi zinokulungiswa ngezixhobo zokulungisa i-dent ezingenapeyinti.
Eyona nto ixhaphakileyo yokusetyenziswa kwezixhobo zokulungisa i-dent ezingenapeyinti kukulungisa umonakalo wesichotho, ukulunywa emnyango, isikrelemnqa esincinci, isifotho esikhulu kunye nomonakalo womgca womzimba.
Le ndlela inokusetyenziselwa ukulungisa iipaneli ezonakalisiweyo zokupenda kwakhona ngokunciphisa ukusetyenziswa kwesigcini-mzimba. Itekhnoloji ngoku yaziwa ngokuba yi "push push".
Izinto ezithintelayo ukulungiswa ngempumelelo kunye nokulungiswa kwamazinyo angenamibala kubandakanya ukuguquguquka kwepeyinti (uninzi lwezinto zokucoca iimoto namhlanje ezinokufezekisa i-PDR ephumeleleyo) kunye nobungakanani bentsimbi eyonakeleyo kwaye yolulwe, kuxhomekeke kubukhulu befilimu yepeyinti. Isinyithi, ukugoba okanye ukomelela komonakalo, kunye nefuthe lamandla. Ngokubanzi, ukungabi nzulu kwesifotho, kokukhona kuya kubakho ukulungiswa. Iidents ezininzi ngobubanzi zinokulungiswa nangayo le ndlela okoko nje intsimbi kunye nepeyinti zinganwetwanga. Izithambiso ezingenzulu nzulu okanye iindawo ezinqamlezileyo zinokulungiswa zikwinqanaba elamkelekileyo, kodwa imilenze ebukhali kakhulu kunye neentsika zinokungakulungeli ukulungiswa kweedenti ezingapeyintwanga.